५० सैयाको अस्पतालकाे हरिबिजोग, एक जना डाक्टरको भरमा अस्पताल – Vision Khabar
५० सैयाको अस्पतालकाे हरिबिजोग, एक जना डाक्टरको भरमा अस्पताल
। २६ फाल्गुन २०७४, शनिबार १०:०० मा प्रकाशित
जाजरकोट, २५ फागुन । जिल्ला अस्पताल जाजरकोट मा हाल ब्यबस्थापन समितिको लार्परवाहिका कारण ५० सैयाको जिल्ला अस्पताल नाममा मात्र सिमित भएको छ । दैनिक अनुगमनमा ध्यान नदिएका कारण हाल १५ सैयाको अस्पाल सम्म पनि सेवा दिनसकेको छ ।
अस्पताल स्रोतका अनुसार अस्पतालका के कति आवश्यकता छ त्यो कार्यालय प्रमुख र ब्यबस्थापन समितिले ब्यवस्था नगर्दा बिरामीलाई सिटामोल पनि किन्न मेडिकलमा पठाउने गरेको नाम नखुलाउने सर्तमा एक स्वास्थ्यकर्मीले बताए । जिल्ला अस्पताललाई ५० सैयाको नाम मात्र गरिएको छ ।
एक जना डाक्टरको भरमा काम अगाडि बढिरहेको छ । उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई कति आवश्यकता पर्छ भनि औषधीको लिस्ट माग्नेर सो लिस्ट उपलब्ध गराउँदा कुनै सुनुवाइ नहुदा उपचारसमेत गर्न गाह्रो भएको बताए । ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर शाही बारेकोट गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएयता दुवै तर्फ समय दिन नसक्दा अस्पतालको हरिबिजोग भएको सेवाग्राहीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
नत सिटामोल छ नत स्वास्थ्यकर्मी नाममा मात्र ५० सैयाको
उता उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले जिल्ला भित्र र बाहिर हुने तालिम गोष्ठीहरुमा कार्यालय प्रमुख सहभागि हुने यर्थाथ समस्या नआउने बताए । हाल जिल्ला अस्पतालमा ५ दिनको अन्तरमा कार्यालय प्रमुख फेरिने गरेको स्वास्थ्यकर्मी गिता देवि न्योपानेले बताइन ।
नगरपालिकाले बजेट नदिएका कारण हाल औषधी अभाब रहेको कार्यालय प्रमुखले भनेपछि हाल सेवाग्राहीलाई मेडिकलमा पठाउने गरेको बताइन । उता भेरी नगरपालिकाले कर्मचारि लाइ तलब भत्ताकाे लागि मात्र बजेट भएकाेले सेवा ग्राहिलाइ झुटाे सुचना नबाढ्न अाग्रह गरेकाे छ ।
तस्बीर प्रसुति गृह निर्माणको कार्य अलपत्र अवस्थामा रहेकाे भवन
सदरमुकामस्थित जिल्ला अस्पताल परिसरमा चार बर्षअघि नै बनि सक्नुपर्ने प्रसुति गृह अझै बन्न सकेको छैन । भवन निर्माणको कार्य हालसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा छ ।शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय सुर्खेतबाट आर्थिक बर्ष २०६८/०६९ मा ठेक्का भई भवन निर्माणको जिम्मा फ्राइण्डस कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. कोटेश्वर (३५) काठमाडौंले लिएको थियो । २०६८ चैत्र २६ मा सम्झौता भई २०७० मंसिर २९ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो । निर्माण कार्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको निर्माण व्यवसायीको चरम लापरवाहीका कारण भवन निर्माणको काम ६ बर्षदेखि अलपत्र परेको हो ।
भवनको डीपीसी मात्र गरेर निर्माण व्यवसायीले काम छोडेर सम्पर्क विहिन भएपछि यो भवन लामो समयदेखि अलपत्र परेको हो । जग हालिएको भवनमा अहिले सिसौंका विरुवा उम्रिएर ठुला रुख बनेका छन् । एक करोड १६ लाख ८५ हजार लागतको प्रसुति भवन निर्माणको काम निर्माण व्यवसायीले घटि घटाउमा ७४ लाख ६६ हजारमा लिएका थिए । बढी लागतको काम घटाघटमा लिदा पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । ठेक्का स्वीकृत गराएको कम्पनीले पेटी (अन्य) ठेकेदारलाई कामको जिम्मा दिने र आफूले काम नगर्दा पनि भवन निर्माण अलपत्र परेको हो ।
अत्याधुनिक प्रसुतीकक्ष बनाएर विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको लक्ष्य भवन निर्माण नहुँदा अधुरै रहेको छ । प्रसुती गृह पुरानो भवनमा जेनतेन संचालन भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । यसको मारमा जिल्लाबासी परेका छन् । जिल्लाको कुशे गाँउपालिका ६ स्थित घरंगा स्वास्थ्य चौकीको भवन पनि ६ बर्षदेखी अलपत्र छ ।
लोहनी एण्ड ब्रोदर्स तथा एमटी कन्ट्रक्सनले २०५८ सालमै भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । तर स्वास्थ्यचौकी भवनको डीपीसी गरेर निर्माण कम्पनीले काम छोडिदिएपछि सो भवन पनि अलपत्र अवस्थामा छ । समयमा आफ्नै भवन निर्माण नहुँदा स्वास्थ्यचौकी लामो समयदेखि भाडाको घरबाट संचालन भइरहेको छ । भाडाको घर व्यवस्थित नहुँदाउ पचार सेवासमेत प्रभावित भएको छ ।
स्थानिय धनबहादुर सिहले भने ‘छिटो भवन निर्माणका लागी धेरै ठाँउठाउँमा हारगुहार नै गर्यौं तर कतैबाट आजसम्म सुनुवाई कतै भएन । भवन नबन्दा स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेको छ ।’ भवन बनेपछि स्वास्थ्य सेवा सहज र प्रभावकारी हुने ठानेका जाजरकोट दशेराका मानबहादुर थापा निराश छन् । दशक अघि निर्माण थालिएको स्वास्थ्यचौकी दशेराको बर्थिङ्ग सेन्टर अहिलेसम्म नबनेर अलपत्र परेपछि उनी निराश भएका हुन् ।
भवन नबन्दा पुरानो जिर्ण घरबाटै जेनतेन सेवा प्रवाह भइरहेको छ । तर प्रसुति कक्ष नहुँदा सुत्केरी गराउन स्वास्थ्यकर्मीलाई निकै समस्या हुने गरेको छ । गणेश निर्माण सेवाले २०६४ सालमा दुई बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का स्वीकृत गराएको थियो । तर निर्माण कम्पनीले पेश्की रकम लिएर काम नगरेपछि भवन अलपत्र परको हो । वारम्बारको ताकेतापछि अलपत्र भवनको निर्माण कार्य हालै पुनः शुरु गरिएको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।